NewGene enwetala ikikere nnwale nke onwe nke COVID-19 na mba 6 ọzọ! Na mbụ merie European Ọkachamara Whitelist Grand Slam!
Na mbido Eprel, ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi kwuru na onye na-emepụta Hangzhou nke nchọpụta COVID-19 reagents-NEWGENE (Hangzhou) Bioengineering Company's NEWGENE brand COVID-19 antigen meriri ndị ọkachamara ọkachamara nke mba niile dị na Europe. N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ mụtara na ...
Ozi Ọma! NEWGENE nwetara nnwale nnwale onwe na France
Na May 14, NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit ka akwadoro iji nyocha onwe onye na France site n'aka ANSM. Nke a na - esote nnwale nnwale nke onwe mgbe Germany, Belgium, Denmark, Sweden, Czech Republic. France na Germany bụ mba ndị bụ isi na European Union. Ruo ugbu a, ọ bụ naanị ụlọ ọrụ ole na ole na t ...
Ebumnuche eji Ngwa a adabara maka nchọpụta qualitative nke COVID-19 / Influenza A / Influenza B na Sputum / Stool samples. Ọ na-enye aka na nchoputa nke ibute ọrịa na nje ndị dị n'elu. Nchikota akwukwo coronaviruses belon ...
COVID-19 Mgbochi Antibody / Antigen
Ebumnuche Jiri Ngwaahịa a dabara maka nchọpụta qualitative nke COVID-19. Ọ na-enye aka na nchoputa nke ibute ọrịa na akwụkwọ akụkọ coronavirus. Nchikota akwukwo coronaviruses nke β genus. COVID-19 bụ nnukwu akụkụ okuku ume m ...